AC Filter Capacitor Ndị nrụpụta na ndị na-ebubata ihe - China AC Filter Capacitor Factory
elu pụrụ ịdabere na oval film capacitor maka X ray igwe
Ike: 2.5 μF
Ugboro ugboro: 50 Hz na/ma ọ bụ 60 Hz
Ogo nke voltaji: 660VAC
Okpomọkụ ikuku kacha elu: -40℃ ruo +70℃
Ihe dielectric: ihe nkiri polypropylene metallized
AC filter capacitor (AKMJ-S)
CRE mepụtara ụdị ihe nkiri akọrọ akọrọ AC nzacha nke doziri nsogbu ọdịda AC nzacha.
1. Nnukwu igwe anaghị agba nchara
2. elu kpọmkwem ike
3. ife ịkpụ metallized PP film / PU nke ana achi achi ala onwe-inductance, elu mgbawa nguzogide na elu pụrụ ịdabere.
4. CRE nso nke AC nzacha capacitor etinyere nchekwa na ntụkwasị obi na-achịkwa onwe-agwọ teknụzụ na-eme ka usoro a dabara adaba maka ndị ntụgharị ike na traction, draịva, ike mmeghari ohuru, mpaghara nnyefe ike, ike netwọkụ, na ngwa UPS, wdg.
Ihe nzacha AC (usoro AKMJ-PS)
Ogo iru mmiri siri ike nwale ikpori mmiri, steeti kwụsiri ike na voltaji akpọrọ.
CRE AC ihe nkiri capacitor na-enwe ike ịchekwa ike mmeghari ohuru nke ọma, ọbụlagodi na ebe ọrụ siri ike.
Capacitor ihe nkiri akọrọ maka ngwa eletrọnịkị ike
AKMJ-PS capacitor na-enwe ike ịchekwa ike mmeghari ohuru nke ọma, ọbụlagodi na oke arụ ọrụ.
PCB capacitor agbakwunyere elu emebere maka sistemụ ike dị elu
Usoro AKMJ-PS nke ejiri pin ọnụ mee, gbagoro na bọọdụ PCB.A na-eji ngwa eletrọnịkị ike eme ihe maka nzacha AC.
New AC filter capacitor maka ihe ntụgharị ọgbara ọhụrụ na ngwa UPS
CRE na-emepụta ihe dị iche iche nke ihe nkiri dielectric capacitor - site na ngwọta capacitor dị elu maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ ụgbọ ala, na ndị na-emepụta ihe nkiri dị elu nke dabara na ngwa eletriki eletrik niile na-agbanye ọkụ na-agba ọsọ 100V volts ruo 100 kV.
Ezigbo mma AC ihe nkiri ike capacitor
1: ngwugwu teepu Mylar, ejiri resin mechie;
2: Ọla kọpa na-eduga, obere nha, nrụnye dị mfe;
3: Nnukwu ikike, obere nha;
4: Nguzogide elu voltaji, na-agwọ onwe ya;
5: High ripple ugbu a, elu dv / dt iguzogide ike.
AC capacitor nwere obere inductance maka nnukwu ike traction moto mbanye inverters
A na-eji capacitor usoro AKMJ-S a na-etinye ma chekwaa ike mgbe ike AC dị elu karịa ihe achọrọ site na ibu DC, na inye ike na ibu ahụ mgbe ike AC dị ala karịa ihe achọrọ.
Igwe ihe nkiri metalized maka nzacha AC
Ihe nkiri capacitor maka AC nzacha na usoro ọgwụgwọ onwe, usoro ịcha ọkụ pụrụ iche na-eme ka inductance dị ala ma mechaa nwee ntụkwasị obi dị elu.
Igwe ihe nkiri ihe nkiri dị elu nke nwere eriri waya
AC ihe nkiri capacitor AKMJ-PS
1. Nhazi ọhụrụ
2. Okwu siri ike
3. Akwa mma AC ihe nkiri capacitor na ọnụahịa dị mma
Capacitor ihe nkiri AC emebere nke ọma
Nkeji atọ AC filter capacitor (AKMJ-S)
A na-emepụta ihe na-agwọ onwe ya, ụdị akọrọ, ihe capacitor site na iji profaịlụ pụrụ iche, ebili mmiri na-egbutu ihe nkiri PP / PU metallized nke na-eme ka ọ dị ala, nkwụsị nkwụsị na ntụkwasị obi dị elu.A na-eji epoxy enyi na enyi na-ekpochapụ onwe ya mechie elu capacitor.Pụrụ iche imewe ana achi achi dị nnọọ ala onwe inductance.CRE's AC filter capacitor bụ ndị ewu ewu na-eji na traction ụgbọ oloko, grid ike, njikwa ike na ngwa UPS.
Akọrọ ụdị metalized film AC capacitor na cylinderical Ọdịdị
CRE mepụtara ụdị akọrọ ihe nkiri AC filter capacitor nke nwere ike iguzogide oke voltaji na ike ịgwọ onwe ya.A haziri capacitors AC filter nke ọma maka sekit AC.A na-eji ya na ngwaahịa eletrọnịkị ike, UPS dị elu, inverters wdg.